War deg deg ah-Isbedel kuyimi doorashada gudoonka barlamaanka, codadka oo saaka maraya 400,000 iyo kulamo kadhan ah Musharax Daarood. – Puntland News.net
Home 2017 January 11 Somali News War deg deg ah-Isbedel kuyimi doorashada gudoonka barlamaanka, codadka oo saaka maraya 400,000 iyo kulamo kadhan ah Musharax Daarood.
War deg deg ah-Isbedel kuyimi doorashada gudoonka barlamaanka, codadka oo saaka maraya 400,000 iyo kulamo kadhan ah Musharax Daarood.
Xildhibaanada aqalka hoose ee barlamaanka Soomaaliya ayaa saaka lagu wadaa inay magaalada Muqdisho ku soo doortaan gudoonka cusub ee barlamaanka Jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya.
Qaar kamid ah hotelada magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa kadhacay kulamo u dhexeeyey musharixiinta gudoonka barlamaanka iyo qaar kamid ah xildhibaanada codadkooda dhiiban doona, iyadoona kuladaasi musharax walba ku dalbanayey in isaga la doorto.
Musharixiinta ugu cadcad ayaa waxaa kamid ah Pro Jawaari, Mr Geesey, Xidig iyo Faarax Sheekh Cabdulqaadir, waxaana xalay codadka xildhibaanada lagaarsiiyey aduun lacageed oo gaaraya $400,000 (Afar boqol oo kun).
Warar ay heshay shabakadda Puntlandnews ayaa sheegaya inuu jiro isgaashaam buursi kadhan ah Cabdiraxmaan Xidig iyadoona ay xildhibaanadu ilgaar ah ku hayaan Faarax Sh Cabdulqaadir oo ah maskaxda DAMU-JADIID.